Light Fluorescent Compact
PRO.LIGHTING dia naorina tamin'ny 1998, naorina tao Nanhai, Foshan City.Ny orinasanay dia mirefy 40.000 metatra toradroa.Manana atrikasa manokana ho an'ny fihodinana, fanariana maty, totohondry, tsindrona bobongolo, anodizing reflector, ary jiro fluorescent compact sy fampivondronana jiro LED.
PRO.Lighting dia naorina tamin'ny martsa 1998.
Maherin'ny 40,000 metatra toradroa ny habaka orinasa, miaraka amin'ireo fitaovana famokarana mandroso dia manome antsika fahafahana hanompo tanteraka ny orinasa OEM / ODM ary hahatratra ny kalitao avo lenta amin'ny fandefasana fotoana.
Miaraka amin'ny PRO.LIGHTING eo anilanao, matokia fa manana mpiara-miombon'antoka tsara ianao manana fahalalana sy traikefa manankarena amin'ny indostrian'ny jiro mba hampitomboana ny orinasanao. Azafady mba mifandraisa aminay.
Fitaovana jiro manokana
Ny vokatra jiro fanaontsika dia mihatra amin'ny hotely avo lenta, trano fisakafoanana avo lenta, foibe fandraharahana, birao, trano fonenana, trano fisotroana kafe, fivarotana, fivarotana lehibe ary maro hafa.
Mamorona toerana jiro mampahazo aina sy mahafinaritra kokoa amin'ny fiainanao fandraharahana.Antsoy pro jiro.
Jiro ambany 10029LED
Jiro Track SP8035
Jiro pendant HB8011
Mpanasa rindrina SDL8005
Jiro Grille SPL4030-2
Jiro ambany 10073N
Jiro ambany 10072N
Mpanasa rindrina DL8003
Mpanasa rindrina DL8005
Mpanasa rindrina DL8006
Sary ambany SDL8003
Ampahany kely SDL8005
Mpanasa rindrina SDL8003
Mpanasa rindrina SDL8006
Ny singa rehetra eo ambanin'ny fomba fiasa IQC / OQC. Ny dingana rehetra dia voafehy tanteraka
Fitaovana fitsapana: Fitaovana fitiliana mandroso
Taratasy fanamarinana: CE voamarina
mamorona izahay ary miezaka ny ho lasa orinasa tsara indrindra ary hanome anao ny vokatra tsara indrindra hanomezana fahafaham-po anao!
Faritra indostrialy Shangan Guojia, Tanànan'i Jinsha Danzhao, Tanànan'i Nanhai Foshan, Faritanin'i Guangdong, Sina.
Ahoana no hialana amin'ny fahapotehan'ny hazavana?
Pro.Mankalaza ny faha-24 taona ny Lighting
Ahoana ny fisafidianana ny zoro taratra tsara ho anao...
Fikatonan'ny Taombaovao Sinoa
Torolàlana momba ny vokatra - Vokatra asongadina - Hot Tags - Sitemap.xml
Modern Pendant Light, Spot Light, tsy ifantohan'ny sain'ireo zatovolahy, Led Spot, Cob Spot Light, Spot Light,